Sarimihetsika asa | Avy amin'ny mac aho
Sarimihetsika Steve Jobs notendrena hahazo valisoa 3 BAFTA
Tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra dia nampahafantatra anao izahay fa ny sarimihetsika farany mitantara ny fiainan'i Steve Jobs, nilalao an'i Michael Fassbender ary efa any Espana dia efa. notendrena ho Golden Globes efatra. Mazava fa na dia tsy nanohana ny sarimihetsika aza ny besinimaro, dia raisin'ireo mpitsikera ny horonantsary momba ny Jobs, amin'ny alàlan'ny script nataon'i Aaron Soorkin. Nandritra ny andro vitsivitsy, tsy ho hitantsika raha mandresy ny Golden Globes farany izay nanendrena ilay horonantsary izy.
Sarimihetsika mitovy amin'ity indray mitoraka ity vao avy nahazo fanendrena vaovao telo, tamin'ity indray mitoraka ity ho an'ireo BAFTA anglisy, ny oscars an'ny cinematography anglisy. Ireo fanendrena dia mifanandrify amin'ny sarimihetsika ekena mifanaraka tsara indrindra, mpilalao sarimihetsika mpanohana tsara indrindra ary mpilalao sarimihetsika tsara indrindra.
Miorina amin'ny tantaram-piainan'ny Walter Isaacson ofisialy sy ofisialy, i Aaron Soorkin no nanamboatra azy. Ny fanendrena ho mpilalao sarimihetsika mpanohana tsara indrindra dia mankany amin'i Kate Winslet amin'ny anjara asan'i Joanna Hoffman, fifandraisana amin'ny orinasa. Ny fanendrena ho mpilalao sarimihetsika tsara indrindra nianjera tamin'i Michael Fassbender, izay natolotra ihany koa ho an'ny Golden Globes ao amin'io sokajy io ihany, izay tsy maintsy hiady amin'i Eddie Redmayne, Leonardo Dicaprio, Bryan Cranston ary Matt Damon, izay natolotra ho an'io sokajy io ihany.
Nifantoka tamin'ny famindrana ilay sarimihetsika tamin'ny fety samihafa i Danny Boyle mba hampitomboana ny fahalianan'ny sarimihetsika, araka ny fantatsika rehetra zara raha nanangona dolara 10 tapitrisa mahery hatramin'ny nanombohany ny laharana voalohany tany Etazonia, izay nitentina 60 tapitrisa dolara.
Michael Fassbender dia nahazo ny mari-pankasitrahana amin'ny Festival Festival Film kritikan'i Palm Springs. Homena ireo loka BAFTA ny 14 Febroary ary avy any amin'i Mac avy aho dia hampahafantarinay anao ny / ny loka azon'ny sarimihetsika farany momba ny fiainan'i Steve Jobs.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Sarimihetsika Steve Jobs notendrena hahazo valisoa 3 BAFTA
Apple hanitatra ny ivon-kevitra Reno